January 2021 - Celefans
သငျ့လကျဖဝါး မှာ ငါးရုပျ လက်ခဏာ ပါရငျ သငျ သိနျးသောငျးခြီပိုငျဆိုငျနိုငျပွီ
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on သငျ့လကျဖဝါး မှာ ငါးရုပျ လက်ခဏာ ပါရငျ သငျ သိနျးသောငျးခြီပိုငျဆိုငျနိုငျပွီ
သိန်းသောင်းချီပိုင်ဆိုင်နိုင်သော တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံပေါ်က ငါးရုပ် ကျွန်ုပ်သည် လက္ခဏာပညာကို အသက် ၁၃ နှစ်ထဲက လေ့လာလိုက်စားခဲ့သည်။ သင်ယူခဲ့သော ပညာရပ်များကိုလဲ အပြင်တွင် လက်တွေ့ကျကျလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ လက္ခဏာဆရာလောကသို့ဝင်လာခဲ့တာပါ။ လက္ခဏာပညာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ၇၅% လောက်မီးမောင်းထိုးပြထားသလိုပါပဲ။ ဒီလတော့လက်ဝါးပြင် တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံမှာရှိတဲ့ ငါးရုပ်နဲ့ပတ် သက်၍တင်ပြပေးသွားမယ်။ လက်ဝါးပြင်ရဲ့ လက်သူကြွယ်အောက် မှာ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ မှား တတ်တဲ့ ငါးရုပ်သင်္ကေတတခုပါတတ်တယ်။ သေချာကြည့်ရင်တော့ကွဲပါတယ်။ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းက ဖြောင့်မတ်တယ်။ ငါးရုပ်ကတော့အချွန် အတက်လေးတွေပါတယ်။ ငါးရုပ် […]
(၂၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ဖို့ ရှယ်သိမ်းထားလိုက်ပါ
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on (၂၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ဖို့ ရှယ်သိမ်းထားလိုက်ပါ
သိန်း ၁၅၀၀၀ ကဆ-၄၂၅၉၇၂ …………. သိန်း ၁၀၀၀၀ ဇ ၄၉၆၀၃၅ ……….. သိန်း ၅၀၀၀ ကဇ ၃၂၉၄၆၇ ကစ ၉၈၈၄၂၅ ………….. သိန်း ၂၀၀၀ ဘ ၉၇၅၁၆၃ အ ၇၈၀၉၆၃ ဍ ၇၄၁၆၅၅ က ၈၈၈၁၀၅ ……………. သိန်း ၁၀၀၀ ကစ ၂၀၈၉၉၅ ထ ၃၆၈၁၈၃ ဌ ၅၆၄၃၉၆ […]
ရာထူးတိုးပြီး ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ အမျိုးသမီးပါမောက္ခ (၃)ဦးရဲ့ ကံကြမ္မာဆိုး
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on ရာထူးတိုးပြီး ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ အမျိုးသမီးပါမောက္ခ (၃)ဦးရဲ့ ကံကြမ္မာဆိုး
ကျိုင်းတုံ-မိုင်းခုတ်လမ်းတွင် ရေပူစမ်းသို့ သွားရောက်ရာမှ ပြန်လာသည့် ကားတစ်စီး ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်၊ ​နေ့လယ်ပိုင်းက ဘရိတ်ပေါက်ကာ တိမ်းမှောက်သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်ပါ ဆရာမ ၃ ဦး ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရသည်။ ကျိုင်းတုံမြို့ မှ မိုင်းခုတ်ဘက်သို့ သွားသည့် လမ်း​ပေါ်တွင် ရေပူစမ်းသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရာမှ အပြန်၌ မော်တော်ယာဉ် ဘရိတ်ပေါက်ကာ လမ်းဘေး သစ်ပင်သို့ ဝင်တိုက်ကာ တိမ်းေ မှာက်ခဲ့သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်ပါ ၁၀ […]
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on ထီထိုးသူတိုင်းထီကံကောင်း၍ဆုကြီးဆွတ်ခူးရမည့်ထီအစီအရင်အဓိဌာန်
လူတိုင်း..လူတိုင်းမှာ.. ထီပေါက်စေတဲ့ကံကြမ္မာကံအကြောင်းတရားဟာဆိုရင်ဖြင့်တစ်နှစ်မှာ၃ကြိမ်ကံဇာတာတက်နိုင်ကံကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ထီပေါက်လိုထီကံကောင်းလိုပါကယခုတင်ပြမည့်အစီအရင်လေးအားဆောင်ရွက်ကြည့်ကြပါကုန်။ မိ့မိ့တဦးတယောက်တည်းနေ့စဉ်သောက်သုံးမည်ရေအိုးအသေးစားတလုံးကိုဘုရားစင်အမြင့်တနေရာတွင်ရေအ့ပြည့်ထည့်သောက်ရန်ခွက်အဖုံးတို့ဖြင့်ရှေးဦးစွာပြင်ဆင်ပါ။ ထိုသို့ပြင်ဆင်ပြီးသောအခါမိ့မိ့မွေးနေ့နဝင်းချိန်တွင်ယခုဖော်ပြထားသော’အဖိုးထိုက်တန်သောထီပေါက်ဂါထာ’အား နှစ်သက်ရာ၁၀၈လုံးပုတီးဖြင့်အသံနေအသံထားမှန်ကန်စွာစိတ်လှူပေးရမယ်။တပတ်ကို၁ရက်ပေါ့။တထိုင်တည်းစိတ်ပေးရမှာပါ။ ထိုသို့ပုတီးပတ်စိတ်လှူပြီးတာနဲ့ရေအိုးထဲမှရေတခွက်အပြည့်ကိုသောက်ချပေးရမယ်။မိ့မိ့သောက်သုံးစဉ်စိတ်နှစ်ထားရမည့်အရာမှာ”ငါသည်ထီကံကောင်းတော့မယ့် လူတယောက်ဖြစ်တယ်ထိုအတူထီဆုကြီးဆွတ်ခူးတော့မယ့်သူတယောက်ဖြစ်တယ်”ဟုစိတ်တွင်မှတ်ယူ၍သောက်သုံးပေးရမယ်” တပတ်မှာ၁ရက်၉ပတ်ပြည့်အောင်အဓိဌာန်ပုတီးစိတ်ပေးရမယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုပါကတနင်္ဂနွေနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်တွင်အဓိဌာန်စတင်ရမည်။ တနင်္လာ သားသမီးဆိုပါကတနင်္လာနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်တွင်အဓိဌာန်စတင်ရမည်။ အင်္ဂါသားသမီးဆိုပါကအင်္ဂါနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်တွင်အဓိဌာန်စတင်ရမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဆိုပါကဗုဒ္ဓဟူးနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်တွင်အဓိဌာန်စတင်ရမည်။ ကြာသပတေးသားသမီးဆိုပါကကြသပတေးနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်တွင်အဓိဌာန်စတင်ရမည်။ သောကြာသားသမီးဆိုပါကသောကြာနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်တွင်စတင်ရမည်။ စနေသားသမီးဆိုပါကစနေနံနက်၉နာရီ၄၅မိနစ်တွင်စတင်ရမည်။ အဓိဌာန်စတင်သည်အချိန်မှစတင်၍အဓိဌာန်ပြီးေ့မြာက်သည့်အချိန်အဓိဌာန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည့်နေ့တွင်မိ့မိ့တတ်နိုင်သလောက်ပံသကူဒါနငွေလှူပါ။ ၇ရက်သားသမီးအပေါင်းကျန်းမာထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။ (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်) မူရင်း- ဆရာမစောယုနိုင်(ဧကံသတဲရော့ဗေဒ) ——————- လူတိုငျး..လူတိုငျးမှာ.. ထီပေါကျစတေဲ့ကံကွမ်မာကံအကွောငျးတရားဟာဆိုရငျဖွငျ့တဈနှဈမှာ၃ကွိမျကံဇာတာတကျနိုငျကံကောငျးစနေိုငျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ထီပေါကျလိုထီကံကောငျးလိုပါကယခုတငျပွမညျ့အစီအရငျလေးအားဆောငျရှကျကွညျ့ကွပါကုနျ။ မိ့မိ့တဦးတယောကျတညျးနစေ့ဉျသောကျသုံးမညျရအေိုးအသေးစားတလုံးကိုဘုရားစငျအမွငျ့တနရောတှငျရအေ့ပွညျ့ထညျ့သောကျရနျခှကျအဖုံးတို့ဖွငျ့ရှေးဦးစှာပွငျဆငျပါ။ ထိုသို့ပွငျဆငျပွီးသောအခါမိ့မိ့မှေးနနေ့ဝငျးခြိနျတှငျယခုဖျောပွထားသော’အဖိုးထိုကျတနျသောထီပေါကျဂါထာ’အား နှဈသကျရာ၁၀၈လုံးပုတီးဖွငျ့အသံနအေသံထားမှနျကနျစှာစိတျလှူပေးရမယျ။တပတျကို၁ရကျပေါ့။တထိုငျတညျးစိတျပေးရမှာပါ။ ထိုသို့ပုတီးပတျစိတျလှူပွီးတာနဲ့ရအေိုးထဲမှရတေခှကျအပွညျ့ကိုသောကျခပြေးရမယျ။မိ့မိ့သောကျသုံးစဉျစိတျနှဈထားရမညျ့အရာမှာ”ငါသညျထီကံကောငျးတော့မယျ့ လူတယောကျဖွဈတယျထိုအတူထီဆုကွီးဆှတျခူးတော့မယျ့သူတယောကျဖွဈတယျ”ဟုစိတျတှငျမှတျယူ၍သောကျသုံးပေးရမယျ” တပတျမှာ၁ရကျ၉ပတျပွညျ့အောငျအဓိဌာနျပုတီးစိတျပေးရမယျ။ တနင်ျဂနှသေားသမီးဆိုပါကတနင်ျဂနှနေံနကျ၉နာရီ၄၅မိနဈအခြိနျတှငျအဓိဌာနျစတငျရမညျ။ တနင်ျလာ […]
သမီးက ကလေးလေး ရှိသေးတယျ ဆိုတဲ့ ကတေီဗီ က (၁၆) နှဈကောငျမလေး ရဲ့သနားစရာ
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on သမီးက ကလေးလေး ရှိသေးတယျ ဆိုတဲ့ ကတေီဗီ က (၁၆) နှဈကောငျမလေး ရဲ့သနားစရာ
ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်​ကြိမ်​ငြင်းဆိုနေတာပေါ့ ! ”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း … နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်း​နေပြန်​တယ်​ ! ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါသေးတယ်”ဆိုပြီး… အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေ​တော့…ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း … “မီးလေးရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစားလေ” ..ဆိုပြီး အမြဲ နားပူနားစာလုပ်​​နေတယ်​ ! နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို…. […]
သင့် လက်ဖဝါး နှစ်ဖက်ကို ဒီလိုထောင်ကြည့်ရင် ဘယ်နံပါတ်နဲ့ တူလဲ ကြွားခဲ့နော် …
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on သင့် လက်ဖဝါး နှစ်ဖက်ကို ဒီလိုထောင်ကြည့်ရင် ဘယ်နံပါတ်နဲ့ တူလဲ ကြွားခဲ့နော် …
လူတစ်ယောက်ရဲ့လက် များက သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း ကဲ့သို့သောအရာတွေ အကြောင်း ကို တစ်စုံတစ်ခု ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့သည် သူတို့ပိုင်ရှင်တွေထက် မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက် ကို ပိုပြီး ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး အကြောင်းကို ပြောနေတဲ့ သင့် လက်ဖ၀ါး ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ မှန်/မမှန် ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ၁။ ဘယ်ဘက် လက် ရဲ့ လမ်းကြောင်း က ပိုမြင့်မားခြင်း ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် သည် […]
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံအကူညီသွားတောင်းမိတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ခင်ပွန်းသည် ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ် စိတ်ထိခိုက်ပြီး သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တာကြောင့်တောင်တစ်လုံးပေါ်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ပညာရှိဘုန်းတော်ကြီးထံကနေ အကြံဉာဏ်ရယူဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ် လမ်းလျှောက်ခရီး၊ တောင်တက်ခရီးတွေအပါအဝင် ရက်အနည်းငယ်သွားပြီးတဲ့နောက်တောင်ထိပ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ထံ ရောက်သွားပါတယ်။ တပည့်တော်မရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ သူ့အတွက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နုပျိူမှုတွေကိုရင်းပြီးသူ့အနားမှာပဲ နေခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပြီးလည်း ပြု စုခဲ့တယ်။ ခုတော့ သူက တပည့်တော်မထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူကို ရွေးသွားပြီ။ တပည့်တော်မမှာ အခု […]
သေရွာပြန် နိုင်လူ သို့မဟူတ် သေဘေးစက်ကွင်းမှ မသေဘဲလွတ်မြောက်လာသူ
January 31, 2021 Cele Fans Comments Off on သေရွာပြန် နိုင်လူ သို့မဟူတ် သေဘေးစက်ကွင်းမှ မသေဘဲလွတ်မြောက်လာသူ
အနုပညာ လောကမှာ နိုင်လူလို့ပြောလိုက်ရင် မသိသူ ခပ်ရှားရှား ရယ်ပါ လူဆိုးလူမိုက် ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ လူသိများခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု့ အခိုင်မာ ရရှိထားတဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ရပ်က ဒီလိုဗျ့ စစ်ကိုင်းလေးမျက်နှာ ဘုရားပွဲမှာ သီချင်းသွားဆိုတော့ စင်အောက်က ခလေးတစ်ယောက်က လက်အုပ်လေး ချီပီးတော့ ကျနော် က ဉ်ီးနိုင်လူရဲ့ ပရိသတ်ပါ အဖေ အမေတွေကလဲ ဦးနိုင်လူကို အရမ်းအားပေးကြတယ် အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါလားတဲ့ ကျနော်ကလဲ […]
January 30, 2021 Cele Fans Comments Off on လူပြောအတော်များလာနေတဲ့ အမှတ်တမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းပေါ်လာတဲ့မြင်ကွင်း
လူပြောအတော်များလာနေတဲ့ ဒီနေ့ညနေ စစ်ကိုင်းတံတား(ဧရာဝတီ)ပေါ်မှာ အမှတ်တမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းပေါ်လာတဲ့မြင်ကွင်း credit Zaw Ti ka ——————– လူပွောအတျောမြားလာနတေဲ့ ဒီနညေ့နေ စဈကိုငျးတံတား(ဧရာဝတီ)ပျေါမှာ အမှတျတမဲ့ဓာတျပုံရိုကျရငျးပျေါလာတဲ့မွငျကှငျး credit Zaw Ti ka
မြန်မာလူမျိုးတွေကို တသက်လုံးထည့်လာတဲ့ ဂျင်းအကြီးစားတွေ
January 30, 2021 Cele Fans Comments Off on မြန်မာလူမျိုးတွေကို တသက်လုံးထည့်လာတဲ့ ဂျင်းအကြီးစားတွေ
ခေတ် ကို က လဖက်ညွှန့် ဆိုပြီးရာ ဘာရွက် အညွှန့်တွေ ကို ချဉ်ငံစပ် လုပ် မပုပ်ဆေးတွေ ထည့် ဆီစိမ် ပုလင်းနဲ့ ပိတ်ပြီး တံဆိပ်ကပ်လိုက်ရင် တစ်ဆယ်သား ၃၀၀ တန် ရာဘာညွှန့်တွေ က တပုလင်း ၆၀၀၀ တန်နာမည်ကြီး လက်ဖက်ညွှန့် တွေ ဖြစ်သွား တဲ့ ဂျင်းခေတ်။ (လဖက်စစ် မစစ်ခွဲချင်ရင် Leave margin entire ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ခွဲ […]